माधव नेपाल : 'तेस्रा अध्यक्ष' [नेकपा बहस-१]
किशोर दहाल | २०७६ श्रावण २ बिहीबार | Thursday, July 18, 2019 १७:४०:०० मा प्रकाशित
पार्टी एकताको बेलामा खासै असमझदारी व्यक्त नगरेका नेता माधवकुमार नेपाल त्यसको केही महिनापछि नै छायाँमा पर्दै गए। दुई अध्यक्षले जे भन्यो त्यही मान्न विवश भए। तर पछिल्लो समय उनी तेस्रो अध्यक्षको हैसियतमा पुगेका छन्। अर्थात्, उनको सहमति र असहमतिले अर्थ राख्न थालेको छ। अर्का दुई अध्यक्ष उनलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बदलिँदो परिस्थितिले माधव नेपाल तेस्रो अध्यक्ष प्रतीत हुन थालेका छन्।
अघिल्लो वर्ष असोज ५ मा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्‍यो। अफ्रिकी देश घाना भ्रमणमा रहेका कारण सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल बैठकमा अनुपस्थित थिए।
पूर्व-एमालेलाई १४ वर्ष नेतृत्व गरेका, त्यहाँको संगठनमा बलियो प्रभाव भएका र एमाले–माओवादी एकतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता नेपालको उपस्थिति बिना नै निर्णय भयो। त्यसभन्दा बढी त उनलाई अध्यक्ष केपी ओलीले तत्काल निर्णय नहुने भनेर दिएको आश्वासनविपरीत।
खासमा अध्यक्षद्वयले त्यसखालको निर्णय गरेर केही सन्देश दिन खोजेका थिए। जस्तो कि, नेकपामा अध्यक्षद्वय नै सर्वेसर्वा हो। उनीहरुले जे चाह्यो, त्यही हुन्छ। माधव नेपाल वा अन्य नेता सहयोगी हुन सक्छन्, निर्णायक हुन सक्दैनन्।
तर, उनको असहमतिपत्र त्यतिकै थन्कियो। पार्टी अध्यक्षले कमजोरी भएको र अब नदोहोर्‍याउने वाचा गर्नुभन्दा बढी केही भएन। स्थायी सदस्यले पनि सामूहिक पहल गरेनन्।
माधव नेपाल पेलिँदै गए।
अवस्था कस्तोसम्म आयो भने, २०७६ बैसाख ९ गते काठमाडौंको सभागृहमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७०औं वार्षिकोत्सवमा उनले बीचमै सभाहल छाडेर हिँड्नुपर्‍यो। त्यसमा अध्यक्षद्वयलाई दिइएको प्राथमिकता बस्ने कुर्सीदेखि बोल्ने सुचीमा समेत झल्किन्थ्यो। कार्यक्रम स्थल पुगेपछि दुई अध्यक्षले मात्रै सम्बोधन गर्ने थाहा पाएका नेता नेपाल बीचमै हलबाट उठेर निस्किए।
यी त भए विगतका सम्झना।
स्थायी समितिमा पनि उनी दुई अध्यक्षको हाराहारी छन्। ४५ सदस्यीय यो समितिमा प्रचण्ड निकट १३ जना छन्। ओली र माधव नेपालको शक्ति बराबरी छ। दुवै तर्फ १२/१२ जना नेता खुलेरै लागेको देखिन्छ। बाँकी नेता अन्यत्र बाँडिएका छन्।
४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिमा पनि तीन नेताको हैसियतमा अन्तर छैन। २०/३० सदस्यको अन्तर रहेता पनि प्रतिशतको हिसाबमा त्यति ठूलो अन्तर बन्दैन।
मुख्य कमिटीमा केही संख्या कतै नखुल्नेहरुको पनि छ। तर, त्यो आफैंमा प्रभावशाली बन्दैन।
दुई पार्टीको एकताका बेलामा समूह/गुट छायाँमा परे तापनि सांगठनिक एकताको क्रम अघि बढ्दै जाँदा त्यसले पनि अर्थ राख्न थालेको छ। नेताहरुले आफू निकटताकै आधारमा जिम्मेवारी पाउने गरेको देखिन्छ।
पूर्व-एमालेमै पनि माधव नेपाल कमजोर होइनन्। लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका कारण स्वाभाविक रुपमा उनको शक्ति बलियो छ। पछिल्लो महाधिवेशनमा पनि माधव नेपाल जम्मा ४४ मतले पराजित भएका थिए। ओलीले १ हजार ४७ मत पाउँदा नेपालले १ हजार ३ मत पाएका थिए। पदाधिकारीमा पनि नेपाल र ओली समूहका बराबर ७-७ जना निर्वाचित भएका थिए। पूर्व एमालेमा तत्कालीन ७५ जिल्लामध्ये ४७ वटामा माधव नेपाल निकट नेताको नेतृत्व थियो।
तर, दुई अध्यक्षले यो यथार्थलाई बिर्सिन खोजेका थिए। तीनै अध्यक्षसँग बराबरीको शक्ति भएको अवस्थामा दुई पक्ष मिल्ने बित्तिकै तेस्रो पेलिने अवस्था आउँछ नै। यसअघि भएको त्यही थियो।
प्रचण्डलाई अहिले पार्टी एकताको बेलामा सार्वजनिक गरिएको 'गोप्य' सहमति कार्यान्वयन गराउनुछ। त्यसको अर्थ, अबको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको पद उनका लागि खाली हुनु हो। महाधिवेशनमार्फत सहमतिमै आफ्ना लागि अध्यक्ष पद सुरक्षित हुनु हो। सकेसम्म यति ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकसाथ हुनु हो।
प्रधानमन्त्रीको पद त्यतिबेला सुरक्षित हुन्छ, जतिबेला त्यो गोप्य सहमति पूर्व एमालेबाट 'अनुमोदन' हुन्छ। प्रचण्डलाई माधव नेपालले विश्वास दिलाएको बिन्दू पनि यहीँ भएको उनी निकट एक नेता बताउँछन्। 'आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पालना हुनुपर्छ भन्नेमा माधव नेपाल स्पष्ट हुनुहुन्छ', ती नेता भन्छन्।
के ६० प्रतिशतभन्दा बढी शक्ति रहेको पूर्व-एमालेले आफ्ना अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डलाई स्वीकार गर्न तयार हुन्छ त? 'हुँदैन', ती नेता भन्छन्।
सैद्धान्तिक सहजताले ओलीको प्रवृत्तिलाई नडोहोर्‍याउन सक्छ। उनी 'नकारात्मक इगो' भएका मान्छे हुन्। कुनै कुरा चित्त बुझेन भने 'सकाइदिने' सोचले अघि बढ्छन्।
'प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा कतै समस्या हुँदैन। किनकि, उनी दुईपटक भइ नै सके', ती नेता भन्छन्, 'तर, अध्यक्ष बने भने फेरि लोकतन्त्रको परीक्षा सुरु हुन्छ। लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध हो भनेर एमालेले २५ वर्षमा आर्जन गरेको विश्वासको पनि कुरा छ।'
तर, सैद्धान्तिक सहजताले ओलीको प्रवृत्तिलाई नडोहोर्‍याउन सक्छ। उनी 'नकारात्मक इगो' भएका मान्छे हुन्। कुनै कुरा चित्त बुझेन भने 'सकाइदिने' सोचले अघि बढ्छन्। त्यतिबेला, प्रचण्डलाई बाटो खोलिदिएर मुख्य पदाधिकारीमा आफ्ना मान्छे लैजान सक्छन्। तर, यही सूत्र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउँदा पनि प्रयोग हुन सक्छ। (मुख्य तस्बिर : कान्तिपुर)
महराले उच्च अदालतमा दर्ता गराएकाे निवेदन आज इजलासमा पेस हुने
वेस्टइन्डिजविरुद्ध भारतीय टिमकाे घाेषणा, एकदिवसीय र टी २० सिरिज खेल्ने
इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहुविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप, के-के छन् अभियोगहरू?
जापानको सुपरमार्केट बजारको व्यापारमा कमी
नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीद्वारा सुरक्षा माग
मन्त्री र सचिवहरू बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले भने- मन्त्री चटपटाएनन् भने म छटपटाएर केही हुँदैन
बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर ५.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प
उच्च अदालतका ८ न्यायाधीशको सरुवा, को कहाँ? [सूचीसहित]
बुधबार दिउँसो ४ बजे नयाँ मन्त्रीको शपथ ग्रहण
बालुवाटार जग्गाकाण्डमा सफाइ दिनेदेखि महरालाई थुनामा पठाउनेसम्म
निर्मला हत्या काण्ड : मानसखण्डका सम्पादक खेम भण्डारी पक्राउ
५० लाख भाडा तिरेर चीनबाट ल्याएको रंगशालाको छाना ‘डिजाइन’ भन्दा ठूलो
मन्त्रिपरिषद् : गए ९, आए ९, नयाँ मन्त्रीको सपथ बिहीबार
नाइट क्लबमा पूर्वराजा र हिमानीको 'सरप्राइज इन्ट्री', यसरी नाचे [भिडियाे/तस्बिर]
उपेन्द्र यादवमाथि कारबाही कि संविधान संशोधनको जिम्मेवारी!